China Cylinder musoro fekitari uye bhizimisi SAMUERI
womuenzaniso: pisitoni humburumbira
Anoshanda mota mamodheru: Ford FOCUS-DV6 2.2
Kutamisa mota: 2.2L
Nhamba sepombi: 16
Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, michina yekurima, jenareta set, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya nekusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Kushanda mamiriro uye zvinodiwa nesilinda musoro
Musoro we cylinder unotakura meya mutoro unokonzerwa nemagetsi gasi uye kuomesa kweye cylinder musoro mabhaudhi, uye panguva imwechete, inowoneswa kune yakanyanya kudziya mitoro nekuda kwekubatana neyepamusoro-tembiricha gasi. Kuitira kuona yakanaka chisimbiso chesilinda, humburumbira musoro haugone kukuvara kana kuremara. Nechinangwa ichi, iyo humburumbira musoro inofanirwa kuve nesimba rakakwana uye kuomarara. Kuitira kuti tembiricha igovaniswe yemusoro we cylinder seyunifomu sezvinobvira uye kudzivirira kutsemuka kwekushisa pakati pezvigaro zvekudya uye zvekubvisa vharuvhu, musoro wesirinda unofanirwa kutonhodzwa zvakanaka.
Yakakwira mhando mota humburumbira musoro:
muenzaniso Pisitoni humburumbira
Anoshanda mota mamodheru Ford FOCUS-DV6 2.2
Kufambisa kwemotokari 2.2L
Uwandu sepombi 16
Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, zvekurima michina, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya nekusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Inokodzera mota, ngarava, mota dzeinjiniya, michina yekurima.
Pashure: Injini Inokanda Crankshaft yePerkins135 ine Oem Nhamba 31312730 yemutengo wefekitori - SAMUEL
Zvadaro: Kumusoro-kumagumo Camshaft
Mota Cylinder Musoro
Ford Cylinder Musoro
Gmw Cylinder Musoro
Hyundai Cylinder Musoro
Jac Cylinder Musoro